About the Eternal Hell and the Day of Judgement – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on June 11, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo	Posted in Dr Zakir Naik, Hell, HitlerTagged About the Eternal Hell and the Day of Judgement, ကျမ်းမြတ်ကုရအန, ဟစ်တလာ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Concept of God in Islam, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion, science
အခုတလော ကျွန်တော် post အသစ်မရေးဖြစ်ပါ။ အလုပ်များတာကတော့အ
ကျွန်တော့ဘလော့ကို Comment တွေ moderate လုပ်ဖို့နဲ့link အသစ်ချိတ်
စကားစပ်မိလို့ WordPress မှာ spam လို့ခေါ်တဲ့ပေါက်တတ်ကရကြော်ညာတွေ
နဲ့မဟုတ်မဟတ်ရေးထားတဲ့ link တွေ ကို comment မှာလာထဲ့ရင် အလိုလို spam box ထဲ
ကျွန်တော့အဖို့ကတော့ Delete လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီspam တွေအများစုဟာ ဆေးကြော်ညာတွေ ညစ်ညမ်းတဲ့ linkတွေ
နဲ့ credit ပေးမယ်လို့လိမ်ညာတဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေများပါတယ်။တွေးကြည့်လိုက်တော့ လွတ်လပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘလော့ထဲမှာ
တောင် မဟုတ်မဟတ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် Aktism လို့ခေါ်တဲ့
spam protector ရှိနေပါလားလို့တွေးမိပြီး တရားရမိပါတယ်။
ကျွန်တော် Post မရေးဖြစ်တာ Dr Zakir Naik ရဲ့ audio lecture တွေ
ပါတယ်။ဆိုကြပါစို့။ Concept of God in Islam အစ်စလမ်ဘာသာရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်အယူ
ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်ထဲကမေးတဲ့သူတွေရဲ့မေးခွန်းကို ကုယအန်ကျမ်းမြတ်သာမက
နားထောင်ပါတယ်။ ကားရဲ့Mp3 player ထဲကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးရင် နားထောင်လို့
မေးခွန်းမေးသူသည် Islam ဘာသာဝင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါ။
ဇာကီ – ဘာကြောင့်လူဆိုးလို့ပြောသလဲ
ဇာကီ – ဒါပေမဲ့ဓားပြအတွက် အတော်ကောင်းတယ်။ လုလို့ရတဲ့ငွေနဲ့
အိမ်အကြီးကြီးဝယ်တယ်။ကားတွေဝယ်တယ်။ မိသားစု သုံးဖြုံးနိုင်တယ်။
ဇာကီ မတရားဖူးဆိုတာခင်ဗျား ဘာကိုအမှီပြုပြီးပြောသလဲ။ဒီလူအတွက်တော့
ဥပမာပေးရရင် ဟစ်တလာ လိုလူမျိုးတယောတ်ဆိုပါတော့။သူ့
အပြစ်မဲ့သေရတဲ့အခြားလူတွေ ချွေး သွေးမျက်ရေ နဲ့ခံစားမှူတွေမပါသေးဖူး။
ဆိုပါတော့ ဟစ်တလာကိုလူ့လောကဥပဒေအရ အများဆုံးအပြစ်
Deep Burn =painless
မရှိတော့ပါ။ နာကျဉ်မှူသိအာရုံခံကလပ်စည်း တွေအရေပြားနှင့်အတူမီးလောင်ရာ
အသစ်ပြန်လည်ပေး မည်ဟုဆိုထားခြင်းသည် ခံစားမှူပေးသော နာကျဉ်မှူသိအာရုံခံကလပ်စည်းတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်လို့ ငရဲမီးနဲ့လောင်ကျွမ်းပြီးတိုင်းနာကျင်မှူခံစားရမယ်လို့ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစီရင်မဲ့နေ့တော်ကြီးရှိ နေကြောင်းကို ဦးဏှောက်သုံးပြီးစဉ်းစားတတ်သူများ အတွက်
One thought on “About the Eternal Hell and the Day of Judgement”
Khu lo, Myanmar bar thar pyan payy tar kyayy zuu tin par tal. De postayann kg tal. I like it.